LXQt 1.0.0 inouya nekuvandudzwa kwakakosha sekuti Usavhiringidze maitiro | Linux Addicts
pablinux | 05/11/2021 15:20 | Desks
Mumwedzi mishoma yadarika tanga tichireporter dhesiki rine manhamba anga akafanana 0.15.0, 0.16.0 o 0.17.0. Haasi iwo akajairwa kana tichitaura nezve chimwe chinhu chinosanganisira masisitimu anoshanda seLubuntu, akavakirwa paUbuntu uye anoshandiswa nevazhinji veavo vanoisa pamberi pekuita pane kunaka kana kugoneka, asi iwo mavhezheni apfuura atove chikamu chekare, akakodzera kudzoserwa, nekuti masikati ano ndinoziva akakanda Zvikamu LXQt 1.0.0.
Pakati pezvitsva zvatinazvo zvemarudzi ese, mune graphical nharaunda uye mumashandisirwo nemaraibhurari. Kutanga uye muchikamu chese, chirongwa chinosimbisa iyo LXQt 1.0.0 zvinoenderana neQt 5.15, yazvino LTS vhezheni yeQt. Vakaunzawo maficha matsva mupanera, iyo terminal uye widget yayo, usavhiringidze modhi yakawedzerwa uye ikozvino iyo kabati yekufaira inoratidza kukurumidza kwepassword yemafaira ane encrypted zvinyorwa.
General nhau muLXQt 1.0.0
Emblems ikozvino inogona kuwedzerwa / kubviswa muFaira Properties dialog.
Recursive customization yemaforodha.
Yakawedzera sarudzo yekuti zvinhu zvedesktop zvinamire nekukasira.
Yakawedzera gomo, dzikisa, uye bvisa zviito kune iyo faira mamiriro menyu mukombuta: ///.
Kudzivirirwa kuparara kana uchikwira mavhoriyamu akavharidzirwa neworkaround (yedambudziko muGLib, Qt, kana zvese).
Yakagadzirisa bhagi muGFileMonitor maererano nekutarisa faira mukati mefolda yekufananidzira zvinongedzo.
Kuvharwa kweiyo faira mashandiro dialog kana kuvhara hwindo guru kwakadzivirirwa.
Yakave nechokwadi cheiyo sarudzo yekurongeka neShift + mbeva mukuona icon.
Kunyora-overwriting mubhokisi rekukumbira faira kwadzivirirwa.
Yakagadziriswa nyaya isinganzwisisi regex yekutsvaga muCyrillic.
Kunatsiridzwa uye kugadzirisa kutsetseka vhiri kupuruzira. Iye zvino compact uye mazita modes anayo nekukasira zvakare (asi inogona kuvharwa kwavari).
Sarudzo dzakawedzerwa kune LXQt faira dialog kuratidza mafaera akavanzika uye kudzima kupuruzira kwakatsetseka mune runyorwa uye compact modes. Zvakare, makoramu akavanzika eiyo LXQt faira dialog mune runyorwa maitiro anorangarirwa.
Iyo LXQt 1.0.0 kodhi ikozvino iripo, zvinoreva, pamusoro pezvose, kuti vagadziri vanogona ikozvino kutanga kushanda nayo. Mumazuva mashoma anotevera, mapakeji matsva achatanga kusvika mukugovewa kweRolling Release, nepo ayo anotevera imwe nzira yekusimudzira achizoawedzera mune ramangwana rekushandisa system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » LXQt 1.0.0 inosvika mushure memakore masere ebudiriro nekuvandudzwa kukuru kwakadai seUsavhiringidza maitiro.